Afo manimba zavaboary eto Madagasikara Nihena 50 % tao anatin’ny enim-bolana
Mpikarakara lanonana sy artista Avelao izahay hiasa
Raha atontaly dia efa 9 volana izao ireo mpikarakara lanonana eto amintsika no tsy nampidi-bola intsony. Raha 5 volana mantsy hoy izy ireo no nisian’ny fihibohana dia efa efa-bolana talohan’io izy ireo no efa niaina ilay hatao hoe vanim-potoana maty vokatry ny ranon’orana…
Nosy be Tratra ilay sambo mpanondrana vehivavy
Mpivady mpisoloky misera sy mitondra olona an-tsokosoko amin’ny sambo mpitondra olona mitsangatsangana no tratran’ ny Polisy miasa eny amin’ny seranana (PAF) ao Nosy be ny 09 Aogositra lasa teo.
Ambatondrazaka Ratsy ny voka-bary 2020
Noho ny tondra-drano nisy tany an-toerana dia ratsy ny voka-bary niakatra tamin’ity taona 2020 ity, hoy ireo mpamboly any an-toerana fa zary nanakofa be aok’izany ireo vokatra.
Ankazotoho Anosimahavelona Potiky ny tondra-drano ny karinem-pokontanin’ny olona
Fokontany iray mandrafitra ny kaominina Anosizato Andrefana, distrikan’Antananarivo Atsimondrano Ankazotoho Anosimahavelona. Betsaka ireo olana sedrain’ity fokontany ity rehefa fotoam-pahavaratra toy ny haratsian’ny lalana, ny tondra-drano ...
Kojakoan-tokantrano Mamerina tsikelikely ny asany ireo tranom-barotra
Taorian' izay fiatoana naharitra, noho ny fihanaky ny valan' aretina coronavirus izay, dia efa miverina tsikelikely ny eo amin' ny sehatra ara toe-karena eto Madagasikara.
Serge Zafimahova “Hevitra hafa tadiavina fa tsy fampitrosana”
Sao dia tokony hevitra hafa no tadiavina fa ho sahirana ny mpiasa hamerina izany na dia 0% azany zana-bola, hoy ny Fanehoan-kevitr’Atoa Serge Zafimahova eo anatrehan’ny vinan’ny fanjakana hampindrana vola ho an’ny mpiasa mpikambana ara-dalàna ao amin’ny CNaPS.
La Réunion kely Raikitra ny fanadiovana, an-jatony no very fihinanana
Olona an-jatony no very asa tanteraka nanomboka ny Alatsinainy teo vokatry ny fikatonan’ny lalana ampitan’ny La Réunion kely ambadiky ny Ministeran’ny Atitany iny. Anisan’izany ireo mpivarotra vy, kapoaka, finday, kojakojan-tokantrano tonta, lamba, sakafo masaka….
Maika ny ady amin’ny afo eto amintsika ho an’ny “Madagascar National Parks” raha tiana ny hahazo mpizahatany vahiny betsaka manomboka ny 01 aogositra ho avy izao ka hatramin’ny faran’ny volana novambra taona 2019.
Ny afo mantsy, raha ny fanazavan’ny dokotera Mamy Rakotoarijaona, tale jeneraly mpisolo toerana eo anivon’ny MNP no fototra iray tena mamotika ireo zavaboary sy zava-mananaina sarobidy eto amintsika, izay tena miantoka ny fahatongavan’ireo mpizahatany vahiny marobe eto Madagasikara sady mampidi-bola vahiny betsaka ihany koa. Efa nahitana ezaka goavana kosa ny ady amin’ny afo teto amintsika. Nihena ho 168 isa mantsy ny tetikafo hitan’izy ireo tamin’ny zana-bolana nandritra ny tapa-taona voalohany teo raha nahatratra hatrany amin’ny 272 tamin’ny taon-dasa. Miandry mpizahatany hatrany amin’ny 250.000 isa hitsidika ireo Park enina malaza eto amintsika izy ireo manomboka amin’ny volana aogositra ho avy io raha 300.000 kosa manerana ny Nosy. Efa vonona amin’ny fandraisana tanteraka izy ireo hatreto ka anisan’ireny ny fanentanana ireo hotely samihafa mba hahay handray vahiny, toy izany koa ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana any amin’ny lalam-pirenena fahenina sy fahafito izay hiarahana amin’ny fitondram-panjakana.